बालबालिका लक्षित बीमा योजना कुन कम्पनीमा कस्तो ? – somai Insurance Group
बालबालिका लक्षित बीमा योजना कुन कम्पनीमा कस्तो ?
नेपाली बीमा बजारमा सञ्चालित विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरुले बालबालिका लक्षित बीमा योजनाहरु बिक्रि गर्दै आएका छन् ।
तपाई पनि आफ्ना बालबच्चाको लागि बीमा योजना खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् नेपाली बीमा बजारमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनीहरुले ल्याएका बालबालिका लक्षित बीमा योजनाहरु:
हेरौँ बालबालिका लक्षित बीमा योजना कुन कम्पनीको कस्तो ?
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बालबालिकाका लागि सूर्या संरक्षित (सावधिक) जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा रहेको छ । भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि १५ वर्षसमम्मको बच्चाको बीमा गर्न सकिन्छ । तर, बीमितको उमेर ६ वर्ष पुगेमा वा बीमा प्रारम्भ मितिबाट २ वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गरी अवधि पूरा भएको अवस्थामा जुन घटनापछि हुन्छ, सो अवधिदेखि जोखिम प्रारम्भ हुन्छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बालबच्चालाई लक्षित गर्दै वात्सल्य जीवन बीमा र बाल उमंग बीमा योजना सञ्चालनमा रहेको छ ।
भर्खरै जन्मेका बच्चादेखि ८ वर्षसम्मका बालबालिका यस योजनामा समावेश हुन सक्नेछन्  । यो योजनाअन्तर्गत १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न सकिन्छ । बीमाशुल्क तिर्ने अवधि न्यूनतम ८ वर्ष र अधिकतम १६ वर्षे हुन्छ भने भुक्तानी अवधि मिति २२ वर्षमा हुन्छ । १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रत्येक वर्ष बीमांकको २० प्रतिशतका दरले २० वर्ष उमेरसम्ममा शतप्रतिशतका बीमांक तथा २२ वर्ष उमेरमा आर्जित बोनस एकमुष्ट प्रदान गरिन्छ ।
बाल उमंग बीमा योजना
१ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि योजना खरिद गर्न सकिन्छ ।
यस योजनाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम अवधि १५ वर्षसम्मको हुन्छ भने अधिकतम अवधि भुक्तानी उमेर १६ वर्ष हुन्छ । त्यस्तै, १ लाखदेखि प्रस्तावकको आयस्रोत र बिमित–प्रस्तावकको स्वास्थ्य परीक्षणका आधारमा अधिकतम बीमांक रकम कायम गर्न सकिन्छ । तर, २० लाखभन्दा बढी रकमको बीमा गर्दा प्रस्तावकको समेत कम्तीमा समान रकमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स
नेशनल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनीले बाल अमृत सावधिक जीवन बीमा बजारमा ल्याएको छ ।
भर्खर जन्मेको बच्चादेखि १५ वर्षसम्मको बच्चाका लागि यो बीमा गर्न सकिन्छ । तर, बिमा गरेको दुई वर्षपछि वा बिमितको ६ वर्ष उमेर पुगेपछि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । कम्तीमा ५० हजार र धेरैमा २५ लाखसम्मको बीमा गर्न सकिनेछ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटी जीवन बीमा योजना बिक्रि गर्दै आईरहेको छ । यस्तै कम्पनीले बालबालिका लक्षित बीमा योजना बाल शिक्षा बीमा योजना बिक्रि गर्दै आएको छ ।
भर्खर जन्मेको बालबालिकादेखि ११ वर्षसम्मका लागि यो बीमा गर्न सकिन्छ । बीमा कम्तीमा पनि १ लाख र बढीमा ५० लाखसम्मको गर्न सकिन्छ । बीमित १९ वर्ष पुगेपछि बीमा परिपक्व हुन्छ । यस योजनामा कर्जा र दुर्घटना लाभ भने उपलब्ध छैन । बीमाशुल्क वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै जन्मेको बच्चा देखि १८ वर्षसम्मको बालबालिको लागी यो जीवन बीमा खरिद उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै यो योजनामा एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक बाबु वा आमा दुई जनाको जीबन बीमा हुने बीमा समाप्तिमा प्राप्त रकम आफ्नो छोरा छोरीको उच्च शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले सावधिक जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले बाल सावधिक जीवन बिमा योजना बिक्रि गर्दै आईरहेको छ । यस योजनामा १ देखि १० वर्षसम्मका बालबालिका सहभागी हुन सक्छन् । न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ५० लाखसम्मको बिमा गर्न सकिन्छ । यस बीमा योजनाको अर्को विशेषता बीमा गरिएको दुई वर्षपछि ऋणसमेत लिन सकिन्छ ।
यस बीमा योजनाअन्तर्गत ५० वर्ष उमेरसम्मको प्रस्तावकले अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क भुक्तान गरी बिमाशुल्क मिनाहा लाभ लिन सक्छन् ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बाल उमंग सावधिक जीवन बीमा, भविष्य सावधिक जीवन बीमा बालबालिका सम्बन्धी इन्डोमेन्ट र एस्योरेन्स पोलिसिको बिक्री गर्दै आएको छ ।
आइएमइ लाइफ इन्स्योरेन्स
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइएमई बाल उज्जवल सावधिक भर्खरै जन्मे देखि अधिकतम १५ वर्षसम्मको बच्चाको लागी यो बीमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ । प्रस्तावको उमेर न्युनतम १७ वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।
न्युनतम बीमा अवधि १० वर्ष तोकिएको छ भने अधिकतम ३० वर्षसम्मको रहेको छ । बीमितको न्युनतम परिपक्वता उमेर १६ वर्ष तोकिएको छ भने अधिकतम परिपक्वता उमेर ३० वर्ष रहेको छ ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बालबालिका लक्षित बीमा योजना अन्र्तगत चाइल्ड इन्डोमेण्ट प्लान रिक्स कमेन्समेन्ट योजना बिक्रि गर्दै आईरहेको छ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बालबालिका लक्षित बीमा योजना रिलायन्स चाइल्ड इसुरेन्स प्लान मेरो मुटु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बालबालिका लक्षित बीमा योजना रिलायबल उच्च शिक्षा जीवन बीमा योजना बिक्रि गर्दै आएको छ । यस जीवन बीमा योजना अधिकतम १५ वर्षसम्म उमेर भएका बालबालिकका लागि खरीद गर्न सकिनेछ ।
भर्खर जम्मेको बालबालिकादेखि १५ वर्षसम्मका लागि यो योजना लिन सकिन्छ । यस बीमा योजनामा जोखिम बीमा सुरु भएको २ वर्षपछि वा बिमितको उमेर ६ वर्ष पुगेपछि मात्रै सुरु हुनेछ । बीमा रकम कम्तीमा ५० हजार र अधिकतम प्रस्तावको आयमा आधारित हुन्छ । अधिकतम बीमा अवधि २५ वर्ष र अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर २५ वर्षको हुुन्छ ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सानिमा बाल सौगात जीवन बीमा
बाल सौगात बीमा योजना
सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाल सौगात बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस बीमा योजना खरिद गर्नका लागी बालबालिका न्यूनतम ३ महिना उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । यसको लागि अधिकतम बीमा गर्ने उमेर ११ बर्ष तोकिएको छ । यस बीमा योजनाको अवधी अधिकतम १० वर्ष र अधिकतम २१ वर्ष कायम गरेको छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन उन्नती पोलिसि
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बालबालिका लक्षित बीमा योजना सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै, कम्पनीको चाइल्ड इन्डोमेण्ड प्लान जीवन किरण पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘बाल भविष्य जीवन बीमा’ ल्याएको छ । यस योजनामा कम्तीमा ५० हजारदेखी बढीमा ५० लाखसम्मका लागि पोलिसी खरिद पाइन्छ । १५ वर्ष सम्मका बालबालिका यस योजनामा प्रवेश गर्न पाउने छन् ।
ज्योति चाइल्ड इन्डोमेण्ड प्लान
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले बालबालिका लक्षित बीमा योजना चाइल्ड इन्डोमेण्ड प्लान नामक पोलिसि बिक्रि गर्दै आईरहेको छ ।
गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स
गुँरास नौलो बाल सुरक्षा
१५ उमेर सम्मका बालबालिकाहरुको उमेरको आधारमा निजको उमेर १६ वा २० वर्ष पूरा भए पछि बीमाकं रकम र बोनस रकम एकमुष्ट प्राप्त गर्ने गरी यस बीमा योजना लिन सकिन्छ ।
यस बीमा योजनामा सहभागी हुन्का लागि न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ सम्म बीमांक रकम बुझाउनु पर्दछ । बार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक रुपमा बीमितले बीमाशूल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बालबालिका लक्षित बीमा योजना बाल समृद्धि बीमा योजना बिक्रि गर्दै आएको छ । भर्खरै जन्मेका बच्चा देखि १५ वर्ष उमेर समुहका बालबालिका यस बीमा योजनामा सरिक हुन सक्नेछन् ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बालबालिका लक्षित बीमा योजना इन्डोमेण्ट जीवन किरण जीवन बीमा योजना रहेको छ । साथै कम्पनीको जीवन उन्नति (चाइल्ड मनि ब्याक प्लान पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन हेरचाह बीमा योजना मार्फत बाबालिका लक्षित बीमा योजना बिक्रि गर्दै आएको छ ।
केटाकेटी र सन्तानको सुरक्षित भविष्यलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो बीमा योजनामा प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्यु भएमा इच्छाईएको व्यक्तिलाई बीमांक रकम एकमुष्ट तुरुन्त भुक्तानी गरिनेछ ।
बीमांक रकम भुक्तानी पछि पनि बीमाले निरन्तरता पाउदै अवधि समाप्ती नभएसम्म प्रत्येक तीन तीन महिनामा विमांक रकमको २.५ प्रतिशत बाँकी जीवन निर्वाह भत्ता (पेन्सन) को रुपमा पाईरहने, बाँकी अवधिको लागि बीमा शुल्क तिर्नु नपर्ने र भुक्तानी अवधि समाप्ती पछि पूनः विमांक रकम र आर्जित वोनस एकमुष्ट भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
Newer बैंकको बीमा अभिकर्ता एजेन्सी खारेज
Older ‘बीमा गर्दा बचत हुन्छ, आवश्यक पर्दा कर्जा पाइन्छ’